Taliyaha booliska Romania oo xilkii looga qaaday canug yar oo inta la afduubtay la dilay - BBC News Somali
Taliyaha booliska Romania oo xilkii looga qaaday canug yar oo inta la afduubtay la dilay
Image caption Dilka gabadha yar ayaa argagax ku reebay dadka Romania
Wasiirka Arrimaha gudaha ayaa waxa uu xilkii ka qaaday taliyaha booliska kaddib markii la dilay gabar yar oo dhowr jeer soo dalbatay gurmad degdeg ah kaas oo aanan laga jawaabin.
Gabadhan 15-jir aheyd ayaa waxaa la afduubtay Arbacadii, hasayeeshee saddex jeer ayey booliska soo wacday oo waxa ay u sheegtay faafaahin ku saabsan halka lagu hayay.
Qoyskeeda ayaa sheegay in askartu aanay wicitaanka gabadha u qaadan si dhab ah, halka boolisku uu sheegay inay adkeyd in gabadhaas la aqoonsado meesha ay ku suganeyd.
Gabadhha ayaa loo malaynayaa inay ku dhimatay gacanta qofkii afduubtay.
Booliska ayaa waxa uu soo helay haraaga bini'aadam iyo dahab gabadhu ay guri ku xiratay, waxa uuna boolisku soo xiray nin 65-jir ah si ay su'aalo u waydiiyaan.
Gabadha oo magaceeda lagu sheegay Alexandra, ayaa la afduubtay mar ay iskudaysay in lagu sii dajiyo gurigeeda oo ku yaal magaalada koontur ku taal ee Caracal, pooliska ayaa sheegay.
Subaxii Khamiistii, ayaa waxa ay saddex jeer soo wacday numberka gurmadka degdega ee 112, oo waxa ay markaasi sheegtay inuu afduubtay darawalkii waday gaari horay u soo qaaday, wakaaladda wararka ee AFP ayaa sidaas ku warramayso.
Taliyaha booliska Ioan Buda ee haatan xilka laga qaaday ayaa sheegay in Alexandra ay ku calaacashay "waa uu soo socdaa, waa uu soo socdaa", ka hor inta aanan taleefanka la jarin.
Mas'uuliyiinta ayaa sheegaya inay bilowgii hore ku adkaatay inay gartaan deegaanka ay gabadha ka soo hadashay.
Waxa ay aqoonsadeen guriga ay rumaysan yihiin in lagu hayay 03:00 aroornimo ee Jimcihii, warbaahinta AP oo soo xiganaysa warbaahinta maxalliga ah ayaa sidaasi sheegtay.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, booliska ayaa waxa uu codsaday in la siiyo warqaddii uu gurigaasi ku baari lahaa walow arrintaasi aanan sharciyan loo baahnayn, oo waxa uu sugay ilaa subaxii dambe si uu guriga u galo.
Guriga ayaanay baarin ilaa markii ay 19 saacadood ka soo wareegatay wicitaankii ugu dambeeyay ee gabadha.
Booliska ayaa haraaga bini'aadamka ee ay meesha ka heleen waxa ay u direen baaritaan iyo waxyaabo kale oo looga shakisan yahay in Alexandra ay leedahay, iyo weliba gabar kale oo 18-jir aheyd oo la la'aa tan iyo bishii Abriil, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidaasi ku warrantay.
Wasiirka arrimaha gudaha Nicolae Moga ayaa sheegay in taliyihii booliska xilka laga qaaday "sababtoo ah waxaa loo baahday in la qaado tallaabooyin adag".
Dacwad oogaha guud ee ku meelgaarka ah Bogdan Licu, ayaa dhanka kale isagoo la hadlayay taleefishinka Antena 3 waxa uu sheegay "Muxuu [boolisku] sugayay… waa in la kala caddeeyaa. Gabar la badbaadin kari lahaa ayaa halkaas ku dhimatay."